वेलकाकी उपमेयर भन्छिन्– कम्प्युटर चलाउनुपर्नेले नगरपालिका चलाइरहेका छन्
२०७७ श्रावण ८ बिहीबार ११:०५:००
काठमाडौं । मुलुक संघीयतामा गएपछि घर–घरमा सिंहदरबार पुग्ने विश्वास थियो । त्यसैले जनता उत्साहित बनेका थिए । तर, गाउँमा पुगेका सिंहदरबारहरू विस्तारै भ्रष्टाचार र अनियमितताका अखडा बनेका छन् । महालेखापरीक्षक कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहको बेथितिप्रति चिन्ता जायर गरेको छ । यसले जनतामा आशाभन्दा बढी निराशाको प्रसार गरिरहेको छ ।
स्थानीय तहले जनताको विश्वास उकास्न नसकिरहेका बेला उदयपुरको वेलका नगरपालिकी उपमेयर राजकुमारी चौधरीको राजीनामा घोषणा चर्चामा आएको छ । नगरपालिका अनियमितता र भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेको भन्दै उनले राजीनामा घोषणा गरेकी छन् ।
चौधरीसँग साँघुले गरेको सवाल र उनको जवाफः
तपाईंले उप-मेयरबाट राजीनामा दिनु भएको हो ?
राजीनामा दिइसकेको छैन । घोषणाचाहिँ गरेको हुँ ।
यस्तो घोषणा गर्नुपर्ने निष्कर्षमा कसरी पुग्नुभयो ?
नगरपालिकामा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढिरहेको छ । त्यस्ता व्यक्तिमाथि कारबाही गर्नुपर्ने मेरो माग थियो÷छ । तर मेयर सा’बलगायतले सुनुवाइ गर्नु भएन । यस्तो ठाउँमा के बसिराख्नु भन्ने लागेर राजीनामा घोषणा गरेको हुँ ।
त्यो अनियमिततामा संलग्न को–को हुन् ? अलि प्रष्ट पारिदिनु न ?
नगरपालिकामा सन्तोष पौडेल नाम गरेका कर्मचारी छन् । उनी चौथो तहका सहायक कम्प्युटर अपरेटर हुन् । जिविसका अनेक कागजपत्र चोरेर बदनाम भई वेलकामा सरुवा भई आएका । उनको काम कम्प्युटर चलाउनु थियो, तर नगरपालिका नै चलाउन थाले । उनकै संलग्नतामा अनेक भ्रष्टाचार र अनियमितता भए । मैले भनेँ– उहाँका कारण हाम्रो बद्नाम भयो । सरुवा गरौं ।
गाउँ कार्यपालिका, सचिवालय सबैले मेरो प्रस्तावमा स्वीकृति जनाए । तर कतैबाट सुनुवाइ भएन । बरु, मेयर सा’ब उल्टै उहाँलाई जोगाउन लाग्नु भयो । यसरी त के पदमा टाँसिरहनु भनेर राजीनामा घोषणा गरेकी हुँ ।
एउटा मामुली कर्मचारी सरुवाजस्तो विषयलाई लिएर राजीनामा नै दिनुपर्ने त थिएन होला नि ?
व्यक्तिभन्दा पनि प्रवृत्तिका कारण राजीनामा दिएको हुँ । सानो, ठूलो जसले गरे पनि भ्रष्टाचार त गलत हो नि ?
त्यहीँभित्र बसेर यसविरुद्ध लड्न सकिन्थ्यो होला नि त ?
सुरुदेखि नै लडेको हुँ । तर केही लागेन त अनि के गरू ?
तपाईं संबद्ध दललाई यसरबो जानकारी गराउनु भएन त ?
गराएँ । तर त्यताबाट पनि केही भएन ।
उपमेयर बनाउने दल नेकपासँगको आबद्धताचाहिँ अब के हुन्छ त ?
विद्यार्थी कालदेखि नै एमालेमा मैले लगानी गर्दै आइरहेको छु । पार्टी त छाड्ने कुरै भएन नि ।
अनि दुई तिहाइको सरकारलाई नै धिक्कार छ भनेर भन्नु भएछ त ?
जनताको अथाह विश्वास पाएर पनि केही गर्न नसकेपछि के भन्नु त ?